New Member 2 ọnwa 1 izu gara aga #1904
HI niile, aha m Alex na im si Scotland!
Enweghị m echiche otu m nwetụbeghị ebe a ma ọ dị ịtụnanya!
New Member 2 ọnwa 1 izu gara aga #1907
Udiri m matara mgbe m nyochara saịtị Rikoooo mere ka m bụrụ onye otu, ihe m hụrụ ugbu a m bidoro ịkpa aka na-eme ka m nwee ezigbo atụmanya. Enwere m olileanya na ihe Boeing 787 Rikoooo na-arụ ọrụ ga-adị ukwuu. Daalụ
New Member 1 ọnwa 2 izu gara aga #1948
Ubochi oma diri unu niile
esonyela m n'elu ikpo okwu dịka ọ nwere ezigbo enyi
banyere onwe m. Anọ m na obodo mara mma Cape Town nke ndịda Africa. ikwesiri ileta m!
Ana m atụ anya ịgwa gị okwu.
Oge ike page: 0.156 sekọnd